Mucaaradka Uganda oo Ka Loolamaya Natiijada Doorashada
Natiijada codbixinta ayaa muujisay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku guuleystay inuu markii shanaad xilka qabto, isaga oo helay 60% codadka.
Garyaqaanada Amama Mbabazi ayaa waxa ay ku guuleysteen inay codsigooda u gudbiyaan maxkamadda sare, talaadadii, waxyar ka hor un inta aan la gaarin waqtigii ay ukeyd soo gudbinta.
Codsiga ayaa waxa uu sharxayaa 28 sharci darro, oo ay ku jiraan laaluush, sanduuqyada codadka oo soo daahay, iyo kaararka codeynta iyo warqadaha doorashada oo aan si-waafqasaneyn, taasi oo mucaaradka ay sheegeen in ay ku jiraan kaarar codbixin oo goor hore lasii diyaariyey laguna riday sanduuqyada.
Mbabazi ayaa kaalinta saddexaad ka galay codeyntii dhacday 18-kii Febraayo. Natiijada codbixinta ayaa muujisay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku guuleystay inuu markii shanaad xilka qabto, isaga oo helay 60% codadka.
Kizza Besigye, oo kaalinta labaad ka galay doorashada ayaa awoodi kari waayey inuu codsiga maxkamadda ugu gudbiyo waqtigii loogu tala-galay. Xafiiskiisa ayaa sheegay in xariga joogtada iyo xabsiyeynta ay ku hayaan ciidamada ammaanka ay suurta-galin weyday inuu diiwaan geliyo in uu ka loolamayo go’aankii doorashada.
Besigye oo ahaa ninka madaxweyne Museveni la baratameyey 15-kii sano ee tagay, ayaa horey ugu dhiidhiyey doorashooyinkii 2001 iyo 2006.
Xisbigiisa ayaa sheegay inuu xafiiska Mbabazi kala hadli doono suurta-galnimada ah inuu ku biiro codsiga uu maxkamadda u gudbiyey. Hase yeeshee Robert Kirunda oo ah khabiir dhinaca sharciga ah oo ku sugan Kamapla, ayaa sheegay in taasi aysan u muuqan mid dhici doonta.
“Uma maleynayo inuu sidaas sameynayo, sababta oo ah waxaan u maleynayaa inay jiraan laba arrin oo aas aasi ah marka ay timaado inuu maxkamadda tago. Tan koowaad waxa ay tahay, kadib doorashadii 2006 waxa uu go’aan ku gaaray inuusan mar dambe maxkamad tagi doonin, sida uu isaga sheegay. Hase yeeshee sidoo kale xanibaadaha haysta. Waxaan la hadlay garyaqaanadiisa waxayna ii sheegeen in caqabadaha haysta ay yihiin kuwa dhab ah, marka ay timaado waxa uu sameyn karo iyo waxa uusan sameyn karin. Sida darteedna wuxuu garowsaday caqabadahaas, marka muxuu sameeyaa?” ayii yiri Kirunda.
Si akstaba, haddii mid ka mid ah dhowrka arrin ee uu ku doodayo Mbabazi mid ka mid ah loo xukmiyo dhinaciisa, doorahsada ayaa la nasaqi doonaa. Tani waxa ay hogaamin kartaa in doorasho kale lagu qabto 30 maalmood gudahood. Maxkamadda sare waxa ay sidoo kale awood u leedahay inay ku dhawaaqdo in qof kale uu ku guuleystay doorashada.
Islamarkaana suxufiyiinta Uganda ayaa waxa ay wajahayaan cadaadis sii kordhaya. Laba goor toddobaadkan, ayaa Taleefishin ku yaalla dalkaas, waxa uu baahiyey ciidamada booliiska oo baabuur ku ridanaya, kuna kaxeysanaya suxufiyiin.
Robert Ssempala, oo ka tirsan shabakadda xuquuqda aadanaha ee saxaafadda Uganda ayaa leh in arirntan ay billaabatay kahor doorashada.
“Tan iyo markii xiliga ololaha doroahsada uu billowday, waxaan diiwaan gelinay 80 dhacdo iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda warbahainta iyo xoriyadda. Arrimahan badankood ayaa waxaa geystay ciidamada ammaanka, gaar ahaan booliiska oo iminka si toos ah ula shaqeeya milatariga.
Dhibanayaasha badankood ayaa ahaa suxufiyiin ka waramayey dhaqdhaqaaqyada la xiriira koxoaha mucaaradka…..xiliyadii dambena waxaan aragnaa in cadaawadda iyo xarigga ka dhanka ah suxufiyiinta ay kordheen, si gaar ahna kuwa ka hadlaya Besigye ee ku sugan Kasangati. Waxaan hadda haynaa in la dhibaateeyey 17 sauxufi, afar ama shan malamood gudahood”. Ayuu yiri Ssempala.
Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dadka ay xirayaan ay yihiin kuwa ay u arkaan inay halis ku yihiin ammaanka, islamarkaana ay hurinayaan rabshado.
Si kastaba, maadaama suxufiyiinta inta badan isl maalinka la xiraba lasoo daayo, islamarkaana badankood aan wax dacwado ah lagu soo oogin, ficillada ka dhanka ah ayaa waxaa loo arkaa xeelad lagu cabsi gelinayo.
Maxkamadda sare ee Uganda ayaa codsiga Mbabazi waxa ay dhageysan doontaa tododbaadka soo socda. Maxkamadda waxa ay haystaa markaa kadib inay 30 maalmood go’aan ku gaarto.
Xasan Xanafi oo Dil Toogasho Lagu Xukumay
Baarlamanka Soomaaliya oo Leh Kulamo Amni
Warbixin: Kalluumeysiga Sharci Darrada ah ee Somalia
(Sixitaan): Warkii Taliyihii Booliiska Saaxil ee la Dilay
Kuuriyada Waqooyi oo Cuna-qabateyn Cusub la Saaray